Iipleyiti eziValiweyo zeFibular zeFibular mveliso kunye nabenzi | IShuangyang
Plate yokuTshixa kweFibular
I-Plate ye-Fibular yokuTshixwa kweNdawo ekude ye-Fibular-I Uhlobo
Iplati yokutshixa kwe-fibral traumal yangaphakathi esembindini inesimo se-anatomic kunye neprofayili, zombini distal kunye ne-fibular shaft.
1. Yenziwe nge-titanium kunye nobuchwepheshe bokuqhubekeka phambili;
2. Uyilo lweprofayili esezantsi luyanceda ukunciphisa ukucaphuka kwethishu ethambileyo;
3. Umphezulu wentsimbi;
4. Uyilo lobume be-anatomical;
5. I-Combi- hole inokukhetha zombini isikisi sokutshixa kunye ne-cortex Screw;
Indawo ethe tyaba yomva we-fibral yokutshixwa kwe-fibral ebonakalisiweyo yokuqhekeka, i-osteotomies kunye ne-ununion ye-metaphyseal kunye ne-diaphyseal yommandla we-distal fibular, ngakumbi kwithambo le-osteopenic.
Isetyenziselwe i-Φ3.0 yokukhiya i-screw, Φ3.0 i-cortex screw, ehambelana ne-3.0 uthotho lwezixhobo zotyando.
Ekhohlo iiHole 4
Ekunene iiHole ezi-4
Ekhohlo iiHole 5
Ekunene iiHole ezi-5
Ekhohlo iiHole 6
Ekunene iiHole ezi-6
Ekhohlo iiHole 7
Ekunene iiHole ezi-7
Ekhohlo iiHole 8
Ekunene iiHole eziyi-8
Uhlobo lwePlateior yoLwahlulo oluValiweyo oluNgasemva
Ukufakwa kwepleyiti yokutshixa emacaleni emva kwexesha elizayo kukumila kwe-anatomiki kunye neprofayili, kokubini okukude kunye nakwishafu ye-fibular.
1. Yenziwe yitanium kunye nobuchwephesha bokuqhubekeka phambili;
5. I-Combi-hole inokukhetha zombini izikrufu kunye ne-cortex;
Ipleyiti yokutshixwa kwamathambo esecaleni esecaleni ebonakalisiweyo yokuqhekeka, i-osteotomies kunye ne-ununion ye-metaphyseal kunye ne-diaphyseal yommandla we-distal fibular, ngakumbi kwithambo le-osteopenic.
Isetyenziselwa ukujija i-.03.0, screw3.0 isikrufu se-cortex, ehambelana ne-3.0 sries iseti yezixhobo zonyango.
Uhlobo lwePlate-III yokuTshixwa kweFaleral
Ipleyiti yokutshixa yeplaza yeplaza esecaleni enesimo esibonakalayo sikwimo ye-anatomic kunye neprofayili, zombini zisezandleni kunye nakwishafu ye-fibular.
1. Umphezulu wentsimbi;
2. Uyilo lobume be-anatomical;
3. Yenziwe nge-titanium kunye nobuchwepheshe bokuqhubekeka phambili;
4. Uyilo lweprofayile ephantsi lunceda ukunciphisa ukucaphuka kwethambo;
Ipleyiti yokutshixa emacaleni esecaleni ibonakaliswe ngokwaphuka, i-osteotomies kunye ne-nonunion ye-metaphyseal kunye ne-diaphyseal yommandla we-distal fibular, ngakumbi kwithambo le-osteopenic.
Isetyenziselwa ukujija i-.03.0, screw3.0 ye-cortex Screw, ehambelana ne-3.0 uthotho lwezixhobo zamathambo.
Ipleyiti yokutshixa inenkqubela phambili kodwa ngakumbi kutshanje iba yinxalenye yamathambo kunye ne traumatology's arry arry yeosteosynthesis yeendlela. Nangona kunjalo, umxholo weplati yokutshixa ngokwawo uhlala uqhubeka ungaqondwa kakuhle kwaye ngenxa yoko ugwetywe gwenxa. Ngamafutshane, ipleyiti yokutshixa iziphatha njengesilungisi sangaphandle kodwa ngaphandle koncedo lwenkqubo yangaphandle kungekuphela nje ngokudluliselwa kwezicubu ezithambileyo, kodwa nangokweendlela zayo kunye nomngcipheko we-sepsis. Ngokwenyani i "fixator yangaphakathi"
Amacwecwe amathambo e-Titanium eentlobo ezahlukeneyo kunye nokubalulwa kwenzelwe ngokwendawo yokusetyenziswa kunye nokumila kwethambo kunye nokujonga ubungakanani bamandla, ukuze kuququzelelwe ukhetho kunye nokusetyenziswa koogqirha bamathambo. Isitya seTitanium senziwe ngezinto ze-titanium ezinconyelwe yi-AO, ezilungele ukulungiswa ngaphakathi kwe-cranial-maxillofacial, clavicle, limb kunye ne-pelvis fractures.
Itafile yamathambo e-titanium (itshixa amacwecwe ethambo) yenzelwe ukuba ithi nkqo, iipleyiti zethambo zokwakheka kwaye ezi zinobunzima obahlukeneyo kunye nobubanzi ngokweendawo zokumiliselwa ezahlukeneyo.
Ipleyiti yethambo leTitanium (ipleyiti yethambo evaliweyo) yenzelwe ukuba isetyenziselwe ukwakhiwa kwakhona kunye nokulungiswa kwangaphakathi kweclavicle, imilenze kunye nokuqhekeka kwamathambo okungaqhelekanga okanye iziphene zethambo, ukukhuthaza ukuphola. Kwinkqubo yokusetyenziswa, ipleyiti yethambo elitshixwayo lisetyenziswa ngokudibeneyo nesikrufu sokutshixa ukwenza inkxaso eqinileyo kunye nokuqina kwangaphakathi. Imveliso ibonelelwa kwiphakheji engacociswanga kwaye yenzelwe ukuba isetyenziswe kuphela.
Kwithambo le-osteopenic okanye ukwaphuka okunamaqhekeza amaninzi, ukuthengwa kwethambo okukhuselekileyo ngezikrufu eziqhelekileyo kunokubekwa esichengeni. Izikrufu zokutshixa azixhomekeki kuxinzelelo lwethambo / ipleyiti ukuxhathisa umthwalo wesigulana kodwa zisebenze ngokufanayo kwiipleyiti zamacala amancinci ezininzi. Kwithambo le-osteopenic okanye ukwaphuka okuninzi, amandla okutshixa izikrufu kulwakhiwo lwe-engile esisigxina ayimfuneko. Ngokusebenzisa izikhonkwane ezitshixwayo kwipleyiti yethambo, ukwakhiwa kwe-engile engaguqukiyo kuyenziwa.
Kugqityiwe kwelokuba kukho isiphumo esonelisayo sokusebenza kunye nokulungiswa kwento eyaphukileyo yokuqhekeka kwehumerus ngeepleyiti zokutshixa. Ngelixa kusetyenziswa ukulungiswa kweplate kukwaphuka indawo ekubekwe kuyo ipleyiti yeyona nto ibaluleke kakhulu. Ngenxa yozinzo lwee-angular, iipleyiti zokutshixa zezona zifakelweyo ziluncedo kwimeko yokuqhekeka kokungcungcutheka okungaphaya.
Egqithileyo Isinye kwisithathu seTyhubhu yokuTshixa iTubular
Okulandelayo: Ipleyiti yokutshixa kweCalcaneal
Ukutshixa i-Plate ye-Maxillofacial
Plate yamathambo yokuTshixa
Iplate yokuVala iTitanium
6.5 Isikere esitshixwayo esingatshiweyo
Multi-yezihlunu macala Tibia Plateau uvala Plate ...
Ipleyiti yokutshixa iVolar-encinci kunye enkulu
I-Multi-axial Distal lateral Tibia yokutshixa i-Plate -...